Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chatanga makundano acho e2019 Africa Cup of Nations nemutsindo unotyisa.
Vazhinhi vaive munhandare yeNational Sports Stadium vakabudamo vaine mufaro mukuru mushure mekunge maWarriors atamba sevakasvikirwa ndokutora mapoinzi ese matatu nezvibodzwa zvakakandwa nakaputeni wavo Knowledge Musona.
Aka ndiko kekutanga kubvira muna 2004 apo Peter Ndlovu akaroverera zvibodzwa zvitatu neSwaziland kuti mutambi mumwe chete wemaWarriors anwise zvibodzwa zvitatu mumutambo mumwe chete.
Kukunda Liberia uku kwasiya Zimbabwe iri pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoinzi matatu, vakaenzana neDRC iyo yakarova Congo Brazzaville 3-1 mune mumwe mutambo asi maWarriors ari panyanga nezvibodzwa.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association, Va Eddison Chihota, vanoti havana neremuromo nematambiro akaita maWarriors vachiti ivo zvakadai zvinofanira kurumbidzwa.
Mubati wepagedhe wemaWarriors, George Chigova, anoti ari kufara zvikuru nezvavakaita neSvondo zvichitevera kutatarika kwakaita chikwata chimwechetecho kuma fainari e 2017 Africa Cup of Nations ayo akaitirwa kuGabon muna Ndira.
Chigova anoti kukunda kwavaita Liberia kwatopfuura achiti iye vave kutarisa kumitambo inotevera sezvo zvisingabatsire kuti vokunda nhasi, vozorohwa mangwana, votadza kuenda kuma fainari.
Mutsigiri wemaWarriors ane mukurumbira, Va Chris Romario Musekiwa, vanoti panofanira kuitwa gadziriro yakasimba kuti maWarriors akwanise kunokunda zvekare mumutambo unotevera.
Chikwata chimwechete kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndicho chinobudirira kuenda kumafainari ayo achaitirwa kuCameroon.
Mutambo weZimbabwe unotevera uriko muna Kurume gore rinouya apo maWarriors achashanya kuCongo Brazzaville sezvo makundano aya ave kumboenda kuzororo remwedzi mipfumbamwe.
Panguva ino, kusvika muna Kurume imomo, zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvichange zvichikwikwidza mumakundano e 2018 World Cup ayo Zimbabwe yakabuditswa neveFifa nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wemaWarriors, Vallinhos.